Nahoana no misafidy anay - Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co., Ltd.
ANTONY 7 HIFIDY ANTSIKA
Manana kalitao avo lenta, fahaiza-manao avo lenta, fahaiza-manao R & D amin'ny ekipa teknika izahay. Ny orinasa dia manana hazondamosina ara-teknika ace, ny mekanika hydraulika dia manao traikefa mihoatra ny 25 taona, manome ny mpanjifa amin'ny milina fanodinana feno sy vahaolana mahomby.
8 dia mametraka tsipika famokarana fanarenana ho an'ny mpanjifa an-trano sy vahiny mba hanomezana olana metaly sy tsy metaly matihanina. izay mety amin'ny fikosoham-bary lehibe sy ny fanodinana indostrialy.Ferrous metaly indostrialy.
Ny takelaka vy rehetra ampiasaina amin'ny fitaovana dia vita amin'ny Q235, 45 #, 16Mn, 65Mn ary ny fepetra hafa hafa avy amin'ny mpanamboatra vy an-trano malaza. Ny takelaka fitafy efitrano famahanana dia vita amin'ny NM500 ary miantoka ny kalitao avo indrindra sy ny fiainana maharitra.
Izahay dia hamokatra modely mafana amin'ny milina mialoha ny fotoana, izay hanafohy be ny fotoana fandefasana.
Manana tsipika famokarana 10 izahay ao amin'ny orinasa. Ny mpitarika ny ekipa isaky ny tsipika famokarana dia tompon'andraikitra amin'ny dingana manontolo amin'ny famokarana milina. dia manana tanteraka mihoatra ny 150 napetraka ny lehibe CNC gorodona karazana mankaleo sy milina fikosoham-bary, NC lathe, NC fanapahana milina, CNC machining foibe sy lalina lavaka fandavahana sy mankaleo milina, ny kalitaon'ny rohy tsirairay dia voafehy.
Alohan'ny handaozan'ny milina ny orinasa dia misy olona manokana ho tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana ny milina ary hanome serivisy fanaraha-maso video. Manome serivisy consulting ara-teknika an-tserasera 24 ora, fametrahana isan-trano ary serivisy fikojakojana aorian'ny varotra manerana izao tontolo izao.
Ny fandrakofana tsenan'ny fitaovana hydraulic marika Unite Top dia mitazona fitarihana azo antoka amin'ny indostria any Shina. Ny vokatra dia amidy amin'ny firenena 30 mahery sy faritra any amin'ny tsena Eoropeana, Azia ary Amerika.
Leaf Compactor sy Baler, Y81 Hydraulic Baler, Scrap Metal Compactor, Aluminum Foil Baler Machine, Baler baoritra vita an-trano, Fitaovana Pop-Top Can Baler,